Xildhibaanad Muna Khaliif oo jirdil u geysatay Xildhibaanad Luul Cabdi (Sawiro) | Goojacade
Home War Xildhibaanad Muna Khaliif oo jirdil u geysatay Xildhibaanad Luul Cabdi (Sawiro)
Xildhibaanad Muna Khaliif oo jirdil u geysatay Xildhibaanad Luul Cabdi (Sawiro)
Afhyeenka ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa beeniyey been abuur ay sheegatay xildhibaanad Muna Kay, islamarkaana soo bandhigay xaqiiqada dhib ay iyada iyo walaasheed u geysteen Xildhibaanad kale.
Afhayeenka ayaa sheegay in aysan waxba ka jirin sida ay sheegtay Muna Kay, balse xildhibaanad Muna Khaliif Sheekh Abuu (Muna Key) iyo walaasheed oo weerar ku qaaday xildhibaanad Luul Cabdi Adan oo xilligaasi ku sugneyd barxadda baabuurta la dhigto ee xarunta Baarlamaanka.
Muno Key Walaasheed waxay wejiga ka dhaawacday xildhibaanad Luul Cabdi oo ay kala dhacday Kabo iyo walxo lagu sheegay Mindi, waxaana dagaalka ka qeyb qaadatay Muno Kay oo markii dambe ku dooday inay iyadu kala celineysay xildhibaannada iyo walaasheed.
Taliyaha ayaa sheegay in Muna Kay walaasheed la xiray, kadibna markii damiin lagu sii daayey ay isku dayday in ay baxsato oo garoonka ka dhoofto, kadibna lasoo qabto.
Sawirada hoos ka muquda waxay muujinayaan dhibka la gaarsiiyey xildhibaan Luul. Sidoo kale hoos ka daawo afhayeenka booliska oo arrintan ka hadlaya.
Warar qaar ayaa sheegaya in arrimo shaqsi ah iyo kuwo haween uu salka ku hayey khilaafka u dhaxeeyay labada xildhibaan ee Muno Key iyo Luul Cabdi, intii aysan Muno adeegsan walaasheed oo dagaalka ku qaadin.
Muddo kadib waxaa baraha bulshada qabsaday muuqaallo ay soo duubtay xildhibaan Muno Key oo arrintii dhacday ka dhigtay mid siyaasadeed, isla markaana sabab uga dhigtay in loo heyso codkii loo qaaday xeerka Bankiga Dhexe, iyadoo dad badan u heshay qeylo dhaanteeda, halka dhibane xildhibaan Luul Cabdi Axmed aan warkeeda la maqlin.
Ciidamada Booliska ayaa hadda gacanta ku haya kiiska, iyadoo baaritaan lagu hayo, waxaana laga yaabaa in Muno Key dacwad lagu soo oogo, iyadoo xilliga dagaalka dhacay ay goobjoogayaal goobta ku sugnaayeen.
Previous articleAl Shabaab oo sheegtay inay 47 ruux ku dileen weerarkii Nairobi
Next articleSAWIRO QATAR OO GAADIID DAGAAL KU WAREEJISAY DOWLADDA SOOMAALIYA